Bu’aalee teekinoolojii adunyaa kessatti bu’aa buusan – Akkam Jirtuu? Nooraa!
Baroota dheeraa dura, dhallii namaa muziqaa dhageefachuuf dirqama DVD , MP3 player fayadamuu qaba ture. Suraa kaasuuf kaameera kireefacuun ykn bitachuun dirqama ture.Filmii ilaaluuf kaasetti deekii, cd kireefachuun dirqama ture, Hara dubati deebinee yeroo ilaaluu nama dhiba adunyaan jijirama gurguddaa keessa dabarteetti. Teekinoolojinis akasuma baayyee foyahee.
Bilbillii ismaartfoonii jalqaba dhaabata apiliin qalaqamee
Bara 2007 dhaabatni apilii, ayifoonii tach iskiriinii waan hedduu hojechu dandahuu gabaaf dhiyeesse adunyaa ajab jechisisee sababni isaas bilbila tokkoon bilbila bilbiluu, vidiyoo ilaalu, muziqaa dhagefachuu, yaadannoo bareessuu, suraa kaasuu, vidiyoo waraabuun dandaahameera. Harra wagga 13 booda adunyaan weerara ismaartfooniitiin weraramteettii ummanni biliyoona 3.5 oltahuus fayyadamaadha.
Dhalli namaa inteerneetii fayyadamuuf sarara shibootti dhima bahuun hedduu nufisisee ture, Kanaan walqabatees bara 1997 waayifaayiin fayyadamtootaf bifa raawtaritiin, bifa dongilitiin gabaaf dhiyaate. Hara egaa meshaalee biliyoona hedduutti lakkaahamantu sarara shiboo neetworki tokko malee wal qunama.
IOT bara 1999 hundaahee
Neetwoorkiin intarneetii wagga hedduu dura emaayilii ittiin ilaaluf qofa nu gargaara ture hara waan heedduu ittin hojeechuuf nu gargaarera innis meeshaaleen tekinooloojii heddu osoo namni harkaan itti hin buhiin odeffannoo fudhatanii piroosees gochuu dandaahaniiruu. Akka fakkeenyaattii ibsaa ibsu ykn dhaamsu, firijiin ykn qabaneesitun maal akka dhumee dursee isiniitti himufaan waan muraasa. IOT kana qofaa miti sadarkaa industrii gurguddaatillee hojii dinqiitu ittin hojetama.
Sagaleedhaan ajaja dabarsuun gudina ismaartifoonii walqabatee waan dhufedha. Isaan kessaas warren akka Alexa, Google Assistant, SiRi faa warra beekamoodha. Ittti fayyadamne sagaleen haala qileensaa , yeroo fi ejaja kan biro biro kennuufii dandeenya.
Fayyadamtootati kan beeksifamee bara 1999, bu’aan teekinooloojiin harras dhimma itti baahama jira, akka fakeenyaatti bilbilaaf bilbila , bilbilaaf teepii konkolaataa, bilbilaaf heedseetii fi kan biro walqunamsiisuun ni dandahama, haras dhima itti baaha jira. Bara 2012 hanga bara 2018 gidduu meeshaaleen bilutuuzi qaban miliyoona 10 ol turan.
Bara 1996 bu’urefamee, Isa dura dhabatni wajira dame qabu soda tokko malee waajira wirtuu irraa odeffannoo argachuu barbaaduu argachuun danqaa ture, dhufaatii VPN booda garuu waajira wirtu intraneetii fayyadamun dandahameera.
Bitkooyiniinin rikardii cabsee
Kanaan dura haala barameen qarshiif kaffaltin ture, kaash tiraanzakshiinii ture , dhooksaadhaan kan gudatee biit kooyiniin adeemsa kessa bara 2017 yeroo jalqabaatiif rikoordii tiraanzaakshiinii guddaa galmeesse.
Adunyaa bayoometriksii kessatti faashal rekooginiishiiniin jalqabii gaariidha , kanan dura bayomeetriks awtantikeeshiinii fingaar pirantii beekamaa ture, akka sadarkaa cehuumsa haaratti fees rikooginishiinidhan attendaansi fuulaan attendas maashinii irratti gutuun ni dandaahama, bilbila keenyas fulaan banuun ni dandaahama.
Wagoota muraasa dura AI akka tiyoori qofaatti ilaalama ture, dhihoo asitii hojirra oludhaan hoji ajaayibaa ittin hojatama jira akka fakeenyaatti seektara fayyaa kessatti AI fayyadamuun dhukuba ijaa fi kansarii harmaa adda baafameera.
Dirooniin xiyaara hanga xiqqoo nama fe’uu hin dandeenyedha garuu dhimma adda addaaf oluu dandaaha akka fakeenyaatti vidiyoo warabuufaaf ni oola. Garuu dirooniin bu’aan isaa kana qofaa miti hojii lubbu olchuu kessatilee shoora guddaa taphacha jira , qoricha yalaaaf tahaan gessuu, yakka to’achu kessatti bu’aa guddaa buusaa jira.
Social networking – midiyaalee hawaasumma
Midiyaaleen hawaasumma haala nama dhibuun jireenya nama foyyessera , hariro dhala namaa sadarkaa idil adunyaatti ol gudiseera, biznasiin babalacuu dandaheera, cidhifi hiriyummaan hedduus umamera. Aduuyaa gara tokkottis fideera. Gara cinaatiin rakkoo mataa isaa dandahes qaba.